JINGHPAW KASA: MYEN ASUYA HPYEN DAP NI SAGA PA DE LAKNAK KABA GAP
MYEN ASUYA HPYEN DAP NI SAGA PA DE LAKNAK KABA GAP
September (29) bat Kru
Jinghpaw Mungdaw Sadung Ginwang Sadung kaw dap jung nga ai myen hpyen asuyaahpyen dap tat-ma (88) ni myen hpyen ni gaw Saga Pa Mare de laknak kaba ni gap bang taw nga ai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya hpyen dap ni kawn September (27) ya shana de (6) lang, September (28) ya shana (3) lang gap bang ai lam shiga na chye lu ai. Ndai Saga Pa Mare gaw myen asuya kawn tara shang hpaw da ai lapran tsang jawng kaw jawng ma ni marai (210) jan jawng lung hpaji sharin la nga rai nna, hting gaw (160) daram nga ai mare mung re lam na chye lu ai. Ya na zawn myen asuya hpyen dap ni kawn shana shagu mare de laknak kaba hte gap shatsang nga ai majaw buga masha ni hkrit tsang nga ma ai lam, grau nna asak kaba sai ding gai dingla ni, ma kaji ni, machyi makaw hkrum rai nga ai mare masha ni grau nna hkrit tsang nga ma ai lam shiga na chye lu ai.
ကချင်ပြည်နယ် ဆံဒုန့်တွင်တပ်စွဲထားသော ဗမာအစိုးရ၏ တပ်မ (၈၈) မှ ဆဂပါကျေးရွာသို့ နေတိုင်း လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တပ်မ (၈၈) မှ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ညတွင် (၆) ကြိမ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၈) ရက်ညတွင် (၃) ကြိမ် ဆဂပါရွာအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဤ ဆဂပါကျေးရွာတွင် ဗမာအစိုးရမှ တရားဝင်ဖွင့် လှစ်ထားသော အလယ်တန်းကျောင်းရှိပြီး၊ ၄င်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား (၂၁၀) ကျော် ပညာသင်ယူနေကြောင်း နှင့် ဆဂပါကျေးရွာတွင်လည်း အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၁၆၀) လောက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုခဲ့သို့ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ မဆင်မခြင် လူနေရွာအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ ထိတ်လှန့်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိကြောင်းနှင့် အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ် အိုများ၊ အသက်ငယ်သော ကလေးသူငယ်များနှင့် ဖျားနှာနေသူများအတွက် အထူးစိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Mu achye na si ru na ma ai Gwi myen ni e..aten du jang shanhte hkrai yubak katut sha na ma ai.
Dai majaw WP amyu niemyen ngu ai wa hpe nju ai myit rawng na matu WP myusha ma kaji,kaba yawngabaw kaw adup bang ya ra ai.nkau WP myusha ni gaw jinghpaw ga she shaga hkat taw nga yang myen ga lawm wa wa rai ma ai.myen ga shaga yang wa garai madang tsaw sai nga sam ma ai.
Dai laknak ni hpe lu madu la lu yang gaw grau hkrak na re.
shan hte hkrit ai majaw re nga ya na zawn sga ngoi dan ai.